Monday October 17, 2016 - 10:27:11 in Wararka by Super Admin
Maamulka Shiicada ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay inuu billowday duullaanka lagu doonayo in lagu qabsado magaalada Muusil ee Waqooyiga dalkaasi, halkaas oo ay ku nool yihiin inkabadan Laba Milyan oo Muslimiin ah.
maleeshiyaadka shiicada ayaa si xun ula dhaqmay suniyiinta
Kumanaan ka tirsan Ciidamada Meliteriga iyo Booliiska ee Xukuumadda Shiicada oo ay taageerayaan Maleeshiyaadka Xashdu Shacbiga raafidada ah iyo kumanaan kale oo ka tirsan Ciidamada Xukuumadda daba dhilifka ee Peshmarkada ayaa ka qeyb qaadanaya duullaankan Shareeco la dirirka ah, iyadoo sidoo kale dagaalka ay qeyb ka yihiin diyaaradaha dagaalka ee Isbaheysiga Saliibiga ee Mareykanku uu hoggaaminayo.
Duqeymo culus oo xagga cirka ah ayaa saakay waabarigii ku billowday Xaafadaha magaalada Muusil, waxaana go’an inta badan Isgaarsiintii magaalada, iyadoo xaalad adag ay wajahayaan inkabadan Laba Milyan oo ka tirsan Muslimiinta Ahlu Sunnaha ee ku nool magaaladaasi.
Madaafiicda ku dhaceysa magaalada ayaa waxaa laga soo tuurayaa Saldhig Meliteri oo kuyaalla degmada Al-Qiyaara oo qiyaastii 60 km koonfurta kaga beegan magaalada Muusil, halkaas oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay isku uruursanayaan Ciidamada huwanta ah.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Shiicada ee dalka Ciraaq Xeydar Al-Cabbaadi ayaa Shir Jaraa’id oo saakay aroortii uu ku qabtay magaalada Baqdaad waxa uu kaga dhawaaqay inuu billowday waxa uu ugu yeeray howl-galka lagu xoreynayo magaalada Muusil, isagoona tilmaamay in marka magaalada la qabsado ay gudaha u geli doonaan oo kaliya Ciidamada Xukuumadda ee isugu jira Meliteriga iyo Booliiska.
Muslimiinta Ahlu Sunnaha ee ku nool magaalada Muusil ayaa cabsida ugu badan waxay ka muujinayaan Maleeshiyaadka raafidada ah ee loo yaqaano Xashdu Shiiciga, kuwaas oo ku caan baxay cadaawadda fog ee ay u qabaan Ahlu Sunnaha, islamarkaana horey xad-gudubyo waaweyn ugu soo geystay magaalooyinka Tikriit, Falluujah iyo Ramaadi.
Hogaamiye-yaasha Maleeshiyaadka Shiicada ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay u goodinayay Muslimiinta ku nool magaalada Muusil, waxayna ku hanjabeen inay ka aagudan doonaan dadka ku nool magaaladaasi.
Xamlo Cadaawadeedka ka dhanka ah Muslimiinta Ahlu Sunnaha ah ee sida wadajirka ay uga qeyb qaadanayaan Mareykanka iyo raafidada ayaa dhalisay dhimashada Kumanaan Muslimiin ah oo ku noolaa magaalooyinka kala duwan ee dalka Ciraaq, waxaana ku barakacay Malaayiin kale, iyadoo Isbaheysiga Saliibiyada iyo Rawaafidda ay hadda qorsheynayaan in magaalada Muusil ay marsiiyaan Masiir la mid ah kii ay horey u marsiiyeen magaalooyinka Tikriit, Faluujah iyo Ramaadi ee galbeedka dalka Ciraaq.